Topnepalnews.com | नतिजा आउन ३ स्थानीय तह बाँकी ,पछिल्लो मतपरिणाममा कहाँ को अघि ?
नतिजा आउन ३ स्थानीय तह बाँकी ,पछिल्लो मतपरिणाममा कहाँ को अघि ?
Posted on: July 09, 2017 | views: 602
काठमाडौं । दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये ३ स्थानीय तहको मात्र नतिजा आउन बाँकी छ ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा एमाले अघि छ । मेयरमा एमालेका हरि राना १२ हजार ६ सय ३३ मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कांग्रेसका हेमराज खरेलले ८ हजार ७ सय ४४ मतसहित पछ्याइरहनुभएको छ ।
उपमेयरमा एमालेकै कमला आचार्य ११ हजार ७ सय ८ मत पाएर अघि हुनुहुन्छ । उहाँलाई कांग्रेसकी सरस्वती सिटौलाले ९ हजार ६ सय २७ पछ्याइरहनुभएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आज रातीसम्ममा आउने अनुमान गरिएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका एमालेका तारा सुब्बा १३ हजार ४ सय ५० मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई १० हजार ६ सय ३७ मतसहित नेपाली कांग्रेसका तिलक राईले पछ्याइरहनुभएको छ । यस्तै उपमेयरमा एमालेकी एमालेकी मञ्जु भण्डारीक १३ हजार ६ सय ८० मतसहित अघि रहँदा कांग्रेसकी श्यामा रेग्मीले १० हजार १ सय ४८ मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ ।
धरानका ११ वटाको मतगणना सकिएको छ । वडा नम्बर ९ र १० मा विवाद भएपछि पुनः मतगणना भईरहेको छ । वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १२, १३ र १४ मा मतगण्ना सकिएको छ । ७ वटा वडामा एमाले विजयी भएको छ भने ४ वटामा कांग्रेसले जितेको छ । अहिले ९, १०, ११, १५, १६, १७, १८, १९ र २० नम्बर वडाको मत गणना चलिरहेको छ ।
मतगणना चलिरहेका वडामध्ये पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार १८ नम्बरमा कांग्रेस अगाडि छ । १७ नम्बरमा माओबादी अगाडि छ । ११, १५, १६, १९ र २० नम्बर वडामा एमाले अगाडि छ । धरानको मतपरिणाम आउन अझै केहि दिन लाग्ने देखिएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका जीवन थापा ५ हजार ९४ मतसहित अघि हुनुहुन्छ । उहाँलाई कांग्रेसका तोयाप्रसाद शर्माले ४ हजार ५ सय २१ मतसहित पछ्याइरहनुभएको छ ।
यस्तै उपप्रमुखमा पनि एमालेकी सारदा शर्मा ५ हजार ४ सय ५४ मतसहित अघि रहँदा ४ हजार ४ सय मत सहित कांग्रेसकी भलिया रानाले पछ्याइरहनुभएको छ । १० नम्बर वडाको मात्र मत गन्न बाँकी भएकाले आज बेलुकासम्ममा पुनर्बास नगरपालिकाको नतिजा आउने अनुमान छ ।